Akụkọ - Cosmoprof Worldwide Bologna
E yigharịrị nhọpụta nke mbipụta nke 53 nke Cosmoprof Worldwide Bologna na Septemba.
E megharịrị ihe omume ahụ site na 9 ruo 13 Septemba 2021 , na mberede mberede ahụike metụtara njikọ nke mgbasa nke covid19.
Mkpebi ahụ na-egbu mgbu mana ọ dị mkpa. Site n'akụkụ ụwa niile, anyị na-ele mbipụta na-esote anya na atụmanya buru ibu, ya mere ọ dị oke mkpa iji hụ na ihe omume a na-eme nwayọ na nchekwa zuru oke.
Cosmoprof Worldwide Bologna, nke hibere na 1967, bụ ngosipụta ama ama ama ama ama nke mara mma n'ụwa. Ọ nwere ogologo akụkọ ihe mere eme ma nwee nnukwu aha. A na-eme ya mgbe niile na Cosmoprof International Exhibition Center na Bologna, Italy kwa afọ.
Ihe ngosi mara mma nke Italiantali nwere ezigbo aha na ụwa maka ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ ndị na-esonye na ụdị ngwaahịa dị iche iche, ma edepụtara ya dị ka akwụkwọ ngosi mara mma zuru ụwa ọnụ nke Guinness World Book. Imirikiti ụlọ ọrụ mara mma nke ụwa eguzobela nnukwu ụlọ ndozi ebe a iji malite ngwaahịa na teknụzụ ọhụrụ. Na mgbakwunye na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaahịa na teknụzụ, ihe ngosi ahụ na-emetụtakwa ma mepụta usoro nke ụwa, na-aga n'ihu na-agbanwe agbanwe ọkachamara na ewu ewu
Cosmoprof Worldwide Bologna bụ ihe ngosi emere: ụlọ nzukọ 3 raara nye ndị ọrụ akọwapụtara na ọwa nkesa na-emeghe ma na-abịaru ọha na eze nso ụbọchị dị iche iche iji kwado nleta ndị ọrụ ma bulie nzukọ na ohere azụmahịa.
Uwe COSMO, illọ Ntu & Mma bụ salonlọ Mgbakọ mba ụwa nwere ụzọ kachasị mma maka ndị na-ekesa ya, ndị nwe ya na ndị ọkachamara na-ahụ maka ebe ndị mara mma, ahụike, spa, hôtellerie na ntutu isi. Onyinye sitere na ụlọ ọrụ kachasị mma na-eweta ngwaahịa, akụrụngwa, arịa na ọrụ maka ụwa ọkachamara nke ntutu, mbọ na ịma mma / spa.
COSMO Perfumery & Ngosiputa Ngwa bụ ihe ngosi mba ụwa nwere ụzọ kachasị mma maka ndị na-azụ ahịa, ndị na-ekesa ya na ụlọ ọrụ nwere mmasị na akụkọ sitere na ụwa nke ebe ntanetị na-esi ísì ụtọ. Onyinye nke ụdị ihe ịchọ mma kachasị mma n'ụwa nwere ike ịzaghachi maka mkpa nke nkesa na-esiwanye ike ma na-agbanwe agbanwe.
Ihe nkpuchi bụ ihe ngosi mba ụwa kachasị mkpa a raara nye ihe ịchọ mma nke mejupụtara ya na ngwongwo ya niile: akụrụngwa na akụrụngwa, mmepụta nke atọ, nkwakọ ngwaahịa, ndị na-achọ ya, igwe, akpaaka na ọrụ ọrụ zuru oke.